News - Bandhigga Caalamiga ee Dabka ee 11aad ee Uzbekistan (Tashkent)
Bishii Nofeembar 2019, Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. waxay kaqeyb qaadatay Securex Uzbekistan 2019, Bandhigga 11aad ee Caalamiga ee Amniga, Amniga iyo Dabka.
Securex Uzbekistan waxaa sanad walba lagu qabtaa Xarunta Carwada Tashkent ee Uzbekistan iyada oo taageero laga helayo Maamulka Ka Hortagga Dabka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Uzbekistan.
Bandhigyaashu waxay ka kala yimaadeen 20 dal, oo leh aag bandhig ah oo gaaraya 6,200 mitir murabac ah. Bandhigyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qalabka dab-demiska iyo qalabka: gawaarida dab-damiska, bambooyinnada dab-damiska, aaladda ogaanshaha dabka iyo qalabka digniinta, filtarka dabka lagu rido, damiyayaal / tuubbo, dab-demiyeyaasha / wakiillada, qalabka shaqsiyaadka dab-demiska iyo alaabooyinka kale ee dabka.
Taxanaha qalabka kuleylka ee alaabooyinka digniinta dabka ee ay soo bandhigtay shirkadda Anbesec Technology Co., Ltd. ee bandhigga ayaa xiiso weyn ka muujiyay hoggaamiyeyaasha waaxda dabka ee deegaanka. Waxay ku nagaadeen qolkeena si loo fahmo oo loo duubay. (Sawirka ayaa muujinaya goobta lagu soo bandhigayay)
Bandhigyaashu waxay ka kala yimaadeen 20 waddan, oo ay ku jiraan in ka badan 4220 xirfadlayaal, oo leh aag bandhig ah oo ah 6,200 mitir murabac ah. Securex Uzbekistan waa carwada kaliya ee ka dhacda Uzbekistan oo kahadasha dhamaan dhinacyada amaanka. Bandhigu wuxuu leeyahay carwooyin heer sare ah waxaana si weyn u taageeray dowladda dalka. Waa bandhig xirfadeed oo gaadhay heer caalami. Mawduuca 'Securex Uzbekistan' waa horumarinta nidaamka badbaadada bulshada iyo horumarka sii socda ee isdhexgalka ka dhexeeya soo saarayaasha iyo macaamiisha, kuwa wax qeybiyeyaasha ah iyo kuwa xirfadleyda ah ee ka shaqeeya warshadaha amniga.